Forum serasera malagasy Tsy lojika ny KMMR - Dinika forum.serasera.org
Tsy lojika ny KMMR
Fitohizan'ny hafatra : Tsy lojika ny KMMR
hery - 12/05/2003 17:30
Tsy lijika ny KMMR amin'ilay hetsika hataony eto Antananarivo. Nanasa ny prezidàn'ny repoblika izy... kanefa fantatra foana ny kabariny isaky ny manao fivoriana. Sady ny tena tsy maha lojika azy k'lou dia ilay anaraana hoe KMMR izay novaina e. Te hilaza @ vahoaka hoe manohana an-dRAvalomanana kanefa te hilaza @ mpitondra hoe efa mpanohatra.
Ho hita eo ny tohiny rahampitso...
ravatorano - 13/05/2003 19:20
fa ahoana kosa ?
ka raprezi né tsy hiakatra eny mitsiny na ahoana na ahoana é !
marina fa tena mamely ny governemanta izay entin'i Sylla sy Ra8 ny KMMR vao² nefa na izany aza ny fandehanan'' Raprezi eny dia tokony hampikatona ny vavan'ilay Pety kely sy Voninahitsy Be akama ireo.
Tsy lojika mety misy fahamarinany izany nefa aza hadinoina fa tsy mpanohitra bontolo ireo KMMR ireo fa mitady ny sezany very.
njara - 13/05/2003 19:48
Raha ny antony hoe nanasana an-dRa8 indray aloha de fika politika fotsiny e, izaho mino fa tsy ho avy eny zany izy. Natao n-ny KMMR fotsiny io fanasana io (tsy hay tokoa aloha raha tena nisy an'izany e) mba hisitonana ny vahoaka eto Tana mba handeha eny fa za sur fa de ho vitsy² ihany no ho eny
doum - 13/05/2003 20:44
Marina daholo ny teninareo fa tadidio fa izy io koa nge misy haute politique e!
Fa eo aza izany ny olona koa nge e, efa tsy azony harebireby tsony e, ny zava-dehibe dia ny fampandrosoana haingana ary manana anjara amin'izany isika rehetra ka samy tokony hiezaka arak'izay azo atao daholo.
bibi - 13/05/2003 21:33
Sanatria tsy hoe hipasoka ny efa malama etsy ambony fa tena toa manao kitoatoa ihany ry KMMR te hitarika ady amin-dRa8 aloha izy any @ ny sisin-tany dia mody hoe invité-na izy mba soa hidirana ao @ gouvernemanta ry zalahy mba handredrinka ny sambo izay hita fa efa mandeha izao.Tsotra fotsiny ny hafatra:MPANENJIKA AFARA .
hery - 13/05/2003 10:42
EFa nampoizina ihany ny zava-nitranga teny amin'ny tany malalaka manoloana ny kianjan'i Mahamasina androany. Nampiantso fivoriam-bahoaka teny mantsy ny KMMR ho fankalazana ny 13 mai 1972 hono. Amin'izao @ 12 sy sasany izao dia rava tanteraka izany. Rava ny lampihazo ary tsy nisy mpanao politika afaka
nandray fitenenana mihitsy fa nihorahan'ny vahoaka avokoa. I Rev
Andrianalijohn ihany no nahasahy niaka-tsehatra saingy nosiahin'ny vahoaka ka dia nangasihasy nidina.
Efa nampoizina satria tokony efa ho fantatry ny KMMR fa Antananarivo no heverina hanaovana famoriam-bahoaka. Tsy fahamalinana politika izany, fa na
tsy hanao antso aza ny teo amin'ny fitondrana dia sarotra ho an'ny
vahoakan'Antananarivo ny hisafidy ny KMMR raha vao misy fanoherana ny fitondrana lazainy. Na ny AREMA an'Antananarivo aza anie tsy afaka niaraka t@ AREMA foibe intsony fa niova ho Arema Matotra é.
Ny somary mahatsikaiky dia ny fampitana vaovao tsy marina ataon'ny mpanao gazety sasany. Nitondra radio ny olona teny Mahamasina, nahita tsara hoe iza
no tsy mankasitraka ny famoriam-bahoaka... nolazaina anefa fa olom-bitsy no manakorotana. Saika niharan'ny hatezeran'ny vahoaka noho izany ny mpanao gazety vitsivitsy...
Mbola mitohy ny tantara.
xxx - 14/05/2003 18:25
raha nijery mbs aho tamin'ny vaovaony dia hita niseho teo tokoa fa nisy tsy nankasitraka ilay famoriam bahoaka.Io koa mbola miakina amin'ny conviction-n'ny tsi1-1 satria mety nisy nitarika foana ireny fa tsy tongatonga azy teo. Asa nefa fa fomba fijery fotsiny iny.
Raha manao famoriam bahoaka toy ireny ve ny Firaisankinam-pirenena ka misy olona sahy mandrava lampihazo sy ny sisa toy ireny dia hijery fotsiny ve ireo "be boty" ???
Antony iray ilazana fa efa nisy fiomanana irey zavatra ireny.
Izaho manokana dia tena mila izany developpement rapide izany ary tena mandray anjara tokoa amin'ny alalan'ny asako saingy Ingahy Ravalo irery no tena mamana ny finoana matotra anizany fa isika mpanohana sy nametraka azy teo indray no mifandrirotra beniany.
kroodlood - 31/01/2004 19:05
Ary hono hoy aho ry zareo , manao ahoana indray izao ny fihetsiketsehan-dry zareo KMMR @ izao Janary 2004 ?
ratsiraka - 05/02/2004 20:29
Marina fa tena:
Tsy lojika ny KMMR!!!!!
Satria tsy scientifique ohatr'ahy
fijo - 06/02/2004 21:52
amin'ny fitondrana ny firenena any an kady dia tena diabolika scientifique ianao.